17 jona — Teraka ny taona 520 i Hervé. Harivian sy Rivanon no anaran’ny ray sy reniny. Harivian rainy dia mpihira tao amin’ny nosy Grande-Bretagne, ary efa niasa tao amin’ny lapan’ny mpanjaka Childebert. Mpivavaka sady madio ity rainy ity ka tsy azoazony ny nipetraka tao an-dapa, nanapakevitra izy fa hanokana ny fiainany amin’Andriamanitra.
Fifandraisan'ny mpiara-belona (16)
Amin'izao vanim-potoana manahirana misy valan'aretina lava izao dia sarobidy kokoa noho ny hatramin'izay ny fahaizana mihaino ny fiaraha-monina. Lasa nitarika "areti-mandozan'ny fampahalalam-baovao" ireo tsy fahatokisana niangona teo aloha mikasika ny "fampahalalam-baovao ôfisialy", ka lasa sarotra ho an'ny tontolon'ny fampahalalam-baovao ny ho azo itokisana sy hangarahara kokoa. Katesizy momba ny fifandraisan'ny mpiara-belona, iarahana amin'i P. Marcel Ranivomanalina.
[Vaovao hariva] Alakamisy 16 jona 2022
♦ Natomboka androany tetsy amin'ny CCI Ivato ilay fikaonan-doham-pirenena momba ny fahavitan-tena ara-tsakafo. Hapetraka ny "Guichet agricole", hanampiana ny tantsaha mba ho afaka hisambo-bola, hoy ny Filoham-pirenena, raha nanokatra izany tamin'ny fomba ôfisialy... ♦ Hita faty androany tokony ho tamin'ny 2 ora maraina, ilay tovovavy 21 taona, nokarohana tany amin'ny Kaominina Sabotsy Anjiro Moramanga. Nanitsy ny fianakaviany fa famonoana no natao taminy fa tsy fakana an-keriny...
Pejy 8 amin'ny 328